RW Rooble oo doorashada dalka warbixin ka siiyey Golaha Ammaanka ee QM – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
RW Rooble oo doorashada dalka warbixin ka siiyey Golaha Ammaanka ee QM
Allhadaaftimo November 23, 2020 Uncategorized
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, shirkaasi oo ahaa mid Golaha Ammaanka xog lagaga siinayey hawlgallada Qaramada Midoobay ee UNSOM iyo hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaa shirkaas hadal ka jeediyey oo soo gabagabeeyey Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dalwadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Waxa uu sheegay inay Soomaaliya ka go’antahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaqaada sannadkan, iyo doorashada hoggaanka horraanta sannadka soo socda ee 2021-ka.
Waxa uu Ra’iisul Wasaare Rooble sheegay inay ka go’an tahay qabashada doorasho xor ah, isla markaana ku dhacda waqtigeedii.
Previous Masuuliyiinta Gobolka Sanaag Ayaa Bulshada Uga Digay Roobababka Dabaylaha Wata
Next Koronto la’aan maalinkii 3-aad ka taagan xarumaha maamulka G/Banaadir